छोरालाई नैतिक शिक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार
छोरालाई नैतिक शिक्षा
भाद्र २२, २०७५ रामेश्वरी पन्त
काठमाडौँ — बिहान सखारैदेखि रातिसम्म रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाहरूले पस्कने खबरले गर्दा लाग्छ, पुरै देश बलात्कारमय छ । अनि छोरीको मात्र होइन, आफ्नै पनि असुरक्षाको भाव मनमा आउँछ । र पाइला–पाइला त्रसित बन्न पुग्छन् ।
कसरी जोगिने बलात्कारीबाट ? को हुन्, उनीहरू ? कस्ता छन् ? अहा † बलात्कारीको हुलिया ‘स्केच’ बनाउनै सक्दैन दिमागले । बनाओस् पनि कसरी ? कस–कसको स्केच बनाओस् ? कतै बाबु, कतै हजुरबाबु, कतै साथी, कतै प्रेमी, कतै काका, कतै दाजु, कतै शिक्षक, कतै सुरक्षाकर्मी । सबै–सबै बलात्कारका खबरभित्र अटाएका देखिन्छन् ।
पौराणिक कथामा जब राक्षसले दु:ख दिएको प्रसंग आउँछ, दिमागमा एक किसिमको राक्षसी स्केच बन्छ– देख्दै डरलाग्दो, कुरूप, लामा–लामा दाह्रा निस्केको । राक्षसको हुलिया कथामै लेखिएको पाइन्छ । तर आजका बलात्कारी राक्षसको हुलिया कसैले कोर्न सकेको छैन । केवल छोरीहरूलाई उपदेश दिइन्छ, सावधान गराइन्छ– बलात्कारीबाट जोगिऊ † जोगिने त जोगिने तर को–कोसँग र कसरी ?
यसले सबै पुरुषजतिलाई बलात्कारीको आरोप लाग्न सक्छ । त्यसो भन्न खोजेको होइन । तर कुन र कस्तो पुरुष बलात्कारी हुन्छ ? छुट्याउने मानक के हो ? आखिर बलात्कार हुने पुरुषबाटै हो । अपवाद अलग्गै होला । डेढ महिना बित्नलाग्दा पनि कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको अपराधी पत्ता लाग्नसकेको छैन ।
बलात्कारीको शक्तिले राज्यशक्तिलाई कसरी कमजोर पार्न सक्दोरहेछ त भन्ने उदाहरण हो, यो अपराध । सरकारले पटक–पटक गरेर अनुसन्धान टोली खटाएको खटायै छ, तर बलात्कारी फेला पर्दैन । कहाँ गयो ऊ, नेपाल प्रहरीले पत्ता लगाउन नसक्नेगरी !
हालै वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगरले ‘छोरीचेलीहरूका लागि’ भन्दै बनाएको एउटा ‘संहिता’ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । जसमा छोरीलाई बलात्कारबाट जोगिन ‘यो–यो गर’ भनेर ११ बुँदे निर्देशन, उपदेश वा सल्लाह दिइएको रहेछ ।
उल्लेखित बुँदाहरू आफैमा गलत होइनन् होला । तर किन आलोच्य भए भन्नेमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । बलात्कारका घटना हुनुमा कतै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएको हुनसक्ला, अपरिचितसँगको आत्मीयता पनि जिम्मेवार हुनसक्ला । तर अहिलेका घटना र तिनका प्रकृति हेर्दा यस्ता कुरा हास्यास्पद लाग्छन् । दुधे नानीदेखि हजुरआमा उमेरका महिला दिनहुँजसो बलात्कृत भएका खबर आइरहेका छन् ।
यिनीहरूमाथि आक्रमण हुनुमा फेसबुक चलाउने महिला/किशोरी/युवती कति जिम्मेवार होलान् ? अथवा कुनै युवतीको भड्किलो पहिरनले बलात्कारीलाई दुधेनानी झम्टन प्रेरित गर्छ होला ?
अर्को– बाबुआमा, परिवार र कूलको इज्जत थाम्न छोरीले ‘ममाथि बलात्कार हुन्छ कि ?’ भन्दै सधैं सजग र त्रसित बनेर हिँड्नुपर्ने हो ? खै समाजमा छोराजस्तै निस्फिक्री हिँड्न पाउने छोरीको अधिकार ? सधैं र सबैतिरबाट उपदेशका खात किन छोरीका लागिमात्रै ? के छोराका लागि उपदेश आवश्यक पर्दैन ? परिवार र समाजले छोरालाई नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्य र मान्यताका कुरा सिकाउनु पर्दैन ? बाहिर हिंँड्दा कुनै छोरीचेलीमाथि कुकर्म नगर्नु भनेर सिकाउनु पर्दैन ?
समाज अझै ‘छोरामुखी’ छ । जब कुनै ‘छोरा’ले बलात्कार गर्छ, परिवार, आफन्त र समाज नै उसको संरक्षण गर्न धन र शक्ति दुबै प्रयोग गर्न लागिपर्छन् । सुरक्षाकर्मी, न्यायकर्मी र राजनीतिकर्मी सबै उसलाई जोगाउन लाग्छन् ।
कानुनको के कुरा, बलात्कारी पक्राउ परेर प्रमाणित भए पो प्रचलित कानुनले दण्डित गर्ने हो † यहाँ त सामुहिक बलात्कारका पीडितले किटानी जाहेरी दिँदा पनि पक्राउ परेको व्यक्ति ‘प्रमाण नपुगेर’ न्यायालयबाट रिहा हुन्छ । बलात्कारीको न इज्जत जान्छ, न चरित्र ।
बरु ‘बलात्कृत छोरीचेलीका कारण परिवारको इज्जतमा दाग लागेको’ मानिन्छ र उनीहरू विस्थापित हुन बाध्य हुन्छन् । सामाजिक सोचले कानुन र न्याय प्रभावित पार्ने भएकोले समाज बदल्न सक्यो भने छोरीले बेहोर्ने असुरक्षा कम हुन्छ ।
भर्खरै राष्ट्रपतिबाट पदक ग्रहण गर्नेहरूमध्ये बलात्कारीसँग मिलेमतो गरी घटना लुकाउन सहयोग गरेको आरोप लागेका प्रहरी अधिकारी पनि देखेपछि सरकारको सर्वत्र आलोचना भएको छ । स्वयम् राष्ट्रपतिको पनि आलोचना भएको सुनिन्छ ।
निर्मलाहरू जस्ता ‘कोपिला–जिन्दगी’ निमोठिइरहेको अवस्थामा ‘बलात्कारीको संरक्षक’ भनिएकालाई कसरी पदक ? यस्ता विवादित र भ्रष्टहरूको पदक खोसिन वा रद्ध गर्न नमिल्ने भए पूर्व मुख्य सचिवको पदक किन खोसियो होला ? यसबाट प्रस्टै देखिन्छ– सरकार बलात्कारका जघन्य घटनाप्रति संवेदनशील छैन । बलात्कारीलाई सुरक्षाकर्मीले र उनीहरूलाई राज्यले संरक्षण र सम्मान दिने चरित्रकै कारण आज बलात्कारीको मनोबल बढिरहेको छ ।
समाजले दिन–प्रतिदिन नैतिक मूल्य र मान्यता गुमाउँदै गइरहेको छ । कलिला नानीहरूको बलात्कार र हत्याका घटना हेर्दा न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि जीवित नरहेको भान हुन्छ । आज कुनै आमा छोरी स्कुल–कलेज पठाएर ढुक्कसँग घर बस्न सक्दिन । आफू घर बाहिर जाँदा सानी छोरीलाई कसैको जिम्मा लगाएर हिँड्न सक्दिन ।
कसैसँग विश्वस्त हुन सक्दिन ऊ । कसरी विश्वस्त हुने ? न कानुनले अपराधीलाई कठोर दण्ड दिएको देखिन्छ न समाजले । उस्तै परे परिवारले नै बलात्कारी हजुरबाबु र बाबुलाई संरक्षण गर्छ र छोरी–नातिनीलाई घर निकाला गर्छ ।
आज कोपिलामै निमोठिएका निर्मला र पुष्पाहरूको अवस्था देखेर भोलिका आमाहरूमा निराशा छाएको छ । उनीहरू भन्ने गर्छन्, ‘छोरी किन जन्माउने ? बलात्कृत भएर मार्न ?’ यसै त हाम्रो समाजमा कैयौं छोरी गर्भमै मारिन्छन्, त्यसमाथि पनि यस्तो निराशा † छोरी नै नजन्मिए सृष्टि कसरी चल्ला ?
छोराहरूलाई नैतिकवान र चरित्रवान बनाउन नसकिए फेरि पनि जन्मिनेचाहिँ बलात्कारी नै हो । त्यसैले अब हरेक आमाबाबुले उपदेश छोरीलाई होइन, छोरालाई दिनु आवश्यक छ । हरेकले आफ्ना छोरा कहाँ जान्छन् ? के गर्छन् ? कस्ताको संगत गर्छन् ? भनेर चिन्ता र चासो राख्नु आवश्यक छ । छोरीको मात्र होइन, छोराको निगरानी पनि गर्नु जरुरी छ ।
प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:१०